Maxkamadda CAS oo Man City ku wargelisay goorta ay ku dhawaaqayso go’aanka racfaankii looga mamnuucay Champions League – Gool FM
(Manchester) 11 Luulyo 2020. Maxkamadda ciyaaraha ee CAS ayaa shaaca ka qaaday goorta ay ku dhawaaqayso go’aankii ay ka gaartay racfaankii ay u soo gudbisay Kooxda Manchester City ee ay ka qaadatay ganaaxii ay UEFA labada sanadood uga ganaaxday tartanka Champions League.
Bishii Febraayo ayay ahayd markii Man City ay Maxkamadda garsooraha iyo khilaafaafka ciyaaraha ee CAS ay uga qaadatay racfaankii lagaga mamnuucay Champions League, iyadoo UEFA ay ku eedaysay in sanadihii u dhexeeyey 2012 illaa 2016 ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaagga ee Financial Fair Play (FFP).
Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa kooxda Man City ku ganaaxday markaas labo sanadood oo ay ka maqnaanayso Champions League iyo weliba inay bixiso 25 milyan oo gini oo ganaax lacageed ah.
Kooxda Manchester City ayaa ku rajo weyn in go’aanka ka soo bixi doona Maxkamadda CAS uu yahay mid u wanaagsan, waxaana ay ku adkaysatay in haba yaraatee aysan wax qalad ah sameynin, isla markaana ay waxba kama jiraan yihiin dabiyada ay UEFA ku soo oogtay.
Isagoo shalay la hadlayey warbaahinta tababare Pep Guardiola waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay diyaar u tahay wax waliba oo ka soo baxa CAS, waxaana uu yiri: “Diyaar ayaan nahay, kalsooni badan iyo aaminaan ayaan ku qabnaa in naloo ogolaan doono inaan ciyaaro Champions League, maxaa yeelay waxaan doonaynaa inaan garoommada ku jirno sanadahan.”
Maxkamadda CAS ayaa ku wargelisay Kooxda Manchester City xilliga ay shaacinayso go’aankeeda, waxaana sida ay sheegtay ay ku dhawaaqi doontaa Isniinta soo aaddan oo ay taariikhdu tahay 13 bisha July 2020.
Shaxda rasmiga ah ee Kulanka Liverpool iyo Burnley oo la shaaciyey... (Yaa ku bilowday safka hore kulanka ka dhacaya Anfield?)